Ampianaro mandeha any amin'ny fandroana ny alika kely | Tontolo alika
Mila manam-paharetana ianao hampianatra ny alikanao pee sy kotsa amin'ny toerana mety. Aza matahotra anefa fa haingana dia haingana ny fianarany, miankina amin'ny fomba fampianaranao fotsiny izany.
Mety hieritreritra ianao fa efa nianatra ny alikanao, fa indray andro dia manao fahadisoana izy, milamina, matetika dia matetika no mitranga izany aza kivy na kivy ary izany ve no endrika rehetra ampahany amin'ny fizotry ny fianarana Ary tsy ho ela dia hanitsy ny zato isan-jaton'ny fotoana izy. Ho fanampin'izay, etsy ambany izahay dia hilaza aminao zavatra sasany mety hitranga ka ny alikanao no manao ny mila amin'ny toerana tsy mety.
1 Soso-kevitra momba ny fanofana vilany ny alikanao
2 Ary aorian'ny herinandro fahatelo inona?
Soso-kevitra momba ny fanofana vilany ny alikanao
Ao anatin'ny herinandro vitsivitsy voalohany, ny alikanao tsy tokony havela bontolo eraky ny trano. Tsy natao ho an'ny ilana ilaina ihany fa ho an'ny fiarovana ihany koa ary amin'ny lafiny iray dia zazakely. Alao an-tsaina izany ho a zaza izay mila milalao amin'ny toerana iray ary tsy afaka miala sasatra eraky ny gorodona izy io.
Ankehitriny rehefa nametra ny tranonao ianao, dia nampisaraka ny faritra misy ny biby fiompinao, tsipika amin'ny tany manontolo ny gorodona, nefa tsy mamela triatra ary ny alika dia tsy maintsy manana toerana hanamaivanana ny tenany, ankoatry ny milalao sy matory. Aza adino ny manadio ny gazety foana, satria tsy maintsy mahatsapa fa voadoka tanteraka ny filàna.
Ampianaro izy hanao ny mila amin'ny toerana mety. Avelao eo mandritra ny herinandro, fa tsy irery, mila manara-maso azy foana ianao ary milalao betsaka amin'izany ao amin'io toerana io ary raha misy izy dia hanao izany amin'ny toerana mety.
Manomeza dera isaky ny mahita azy misasaka sy mikotrokotroka ao anaty gazety ianao. Tokony hampifaly azy io ianao ary hikolokolo azy ka fantatrao fa manao izany tsara ianao.
Amin'ny herinandro faharoa dia mamoaka ampahan'ny gazety izy ary atakalo ho eo am-pandriana, ka dia naka ny gazety tamin'ny toerana fisakafoanana izy, ary ny vilany ihany no navela hohanina sy rano.
Tohizo amin'ny ambiny rehetra nilahatra tamin'ny gazety ary mandeha mampihena isan'andro ny sisa amin'ny gazety. Raha manao izany amin'ny toerany izy dia mila miarahaba azy ianao, fa raha tsy mety kosa no anaovany azy dia miverena amin'ny fiofanana teo aloha. Tehirizo ao amin'io toerana io ihany izy amin'ny herinandro faharoa ary milalao miaraka aminy any, tariho ny olona hahita azy ao amin'io toerana io.
Ao amin'ny herinandro fahateloAndraso fa hisakafo izy ary aorian'ny fanaovana ny asa aman-draharaha, raha manomboka maimbo ny gorodona na mivoaka isaky ny adiny roa izy dia ento eny amin'ny habakabaka miaraka amin'ny gazety izy. Avelao izy hivoaka aorian'ny nahavitany ny asa, na dia toa very hevitra aza izy.
Ary aorian'ny herinandro fahatelo inona?
Raha manomboka ataovy amin'ny toerana tsy mety, lazao ny tsia mahery, ento ary ento mankany amin'ny habakabaka izany. Raha vitany ny mihanika amin'ny gazety, na dia indray mitete aza, derainao izy toy ny nahazoany tsara. Raha tsy izany dia avelao any mandra-panala azy ao amin'ny gazety. Aza milalao fatratra amin'izany, alika maro, mba tsy hanelingelina ny lalao amin'ny tompony, mahazaka ny filàna mandra-pahatongany tsy afaka intsony ary manao izay tratra. Noho izany, milalao be dia be, fa aza adino ny mijanona indraindray ary hidio.
Tsy ho ela dia ho tsapanao izany manomboka mitady gazety izy ihany. Derao izy ary arahaba tsara hatrany isaky ny mahavita azy.
Tokony hotadidinao ihany koa izany ny tabataban'ny gazety Ny ripeo dia maka fanahy an'ny alika kely ary tena mahazatra azy ny maniry ny hahafinaritra amin'ny fanaovana pecking amin'ny gazety rehetra amin'ny nifiny sy ny hoho. Manala an'io fahazarana io, afafazo rano amin'ny gazety ary avelao ho lena. Amin'izany dia tsy hitabataba izy io rehefa mandrovitra ary ny biby kelinao dia tsy halaim-panahy handringana azy.
Mba tsy hamelana ireo taratasy dia apetaho amin'ny tany isaky ny ova izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Mampianatra ny alikakely hankany amin'ny trano fidiovana
Ahoana ny fomba ahazoana ny pasipaoron'ny alikako